बारामा बाढीले सयौं परिवार विस्थापित विद्यालयलगायत विभिन्न स्थानमा आश्रय लिन बाध्य — HamroBirgunj Dot Com
बारामा बाढीले सयौं परिवार विस्थापित विद्यालयलगायत विभिन्न स्थानमा आश्रय लिन बाध्य
admin ३० श्रावण २०७४, सोमबार १४:५६
वीरगंज, २९ साउन – बारा जिल्लामा बाढीले सयौं परिवारलाई प्रभावित पारेको छ। परसौनी गाउँपालिका–३ र ४ चिलझप्टीका एक सयभन्दा बढी परिवार आज बिहानदेखि बाढीको कारण गाउँमैं थुनिएका छन्।
बङ्गरी खोलामा आएको बाढीले गाउँ जलमग्न भएको हो। सो गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ४ मा रहेका सबैको घरमा पानी पसेको छ। पक्की छतमाथि बसेर जीवन बचाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयले बताएका छन्।
त्यहाँ रहेको कच्ची घरहरूमध्ये १० वटा बाढीले बगाएको छ। यसैगरी कलैया उपमहानगरपालिकाको भवरा टोल पनि डुबानमा परेको छ। स्थानीयहरू विद्यालयमा शरण लिएका छन्। पसाहा खोलामा आएको बाढीले टोल प्रभावित भएको हो। कलैया, वीरगंज सडकखण्डको परसौनीस्थित बङ्गरी खोला सडकभन्दा माथि बग्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले आवतजावतमा रोक लगाएको छ।
खोलामा पानीको बहाव कम नभएकोले बिहानैदेखि आवतजावतमा रोक लगाइएको हो। बारा जिल्लामा बाढीले २० हजारभन्दा बढी घर डुबानमा परेको प्रहरी उपरीक्ष्Fक राजकुमार वैद्यले बताए ।
माछाको लागि आकर्षण बनेको बारा जिल्ला बाढीको कारण माछा व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। बाढीले माछा व्यवसायलाई करोडौंको क्षति पुगेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री माछा सुपरजोन परियोजनाका प्रमुख युगलकिशोर तिवारीले बाढीबाट माछा व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको र करोडौंको क्षति भएको बताएका छन्।
बारा जिल्लामा घर भत्किएर दुईजनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी केही स्थानका पुलहरू बगाएको कारण ग्रामीण क्ष्Fेत्रको सडक सम्पर्क टुटेको छ । जिल्लामा मात्र २ सयभन्दा बढी परिवारका १३ सय व्यक्ति विस्थापित भएका र विभिन्न स्थानमा आश्रय लिएर बस्नुपरेको जिप्रका, बाराले जनाएको छ । बाराको जीतपुर–सिमरा उपमनपाको मदर्सा धर्मशालामा ४ सय विस्थापितले आश्रय लिएका छन्। यसैगरी नितनपुरस्थित नेरानिमाविमा १२५ जनाले आश्रय लिएका छन्। कउमनपाको भवरास्थित नेरामाविमा ४० परिवारका २ सयभन्दा बढीले आश्रय लिएका छन्। परसौनी गाउँपालिकाको इटियाही वडा कार्यालयमा ६० जना र महागढीमाई बबुआइन माविमा ४० परिवारका दुई सयभन्दा बढी मानिसले आश्रय लिएको प्रहरीले जनाएको छ।
बाढीको कारण सिमरा तेलगछिया, कोल्भी बजार व्यवस्थापन समितिको भवन, नेराप्रावि अडेम्बा र कोल्भी नगरपालिकामा समेत बाढीपीडितहरूले आश्रय लिएर बसिरहेको बताइएको छ।
राजधानीसँग जोडिने महेन्द्र राजमार्गको बडाहाकिम पुल निर पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको छ।
मध्यक्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पथलैया बाराले गएरातिदेखि तीन र चार नं. पुलको बीचमा पर्ने बडा हाकिम पुल नजिकै पहिरो गएपछि सडक अवरुद्ध भएको बताएको छ। सडकको अवरोध हटाएर आवागमन सुचारु गर्न डोजरको प्रयोग भइरहेको छ ।
यसैगरी तीन नं. पुल र बेलीब्रिज पुलमा एकतर्फी सवारीसाधन सञ्चालन गरिएको छ। बाढीले पुलको माथिल्लो भागसम्म छुन थालेपछि सुरक्ष्Fालाई दृष्टिगत गर्र्दै एकतर्फी सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको हो।